I-VisCircle: Phambi kweMveliso yakho ye-Ecommerce Amaphepha ane-3D Technology | Martech Zone
I-VisCircle: Phambili ngePhepha leMveliso ye-Ecommerce kunye ne-3D Technology
NgoLwesibini, Julayi 10, 2018 Douglas Karr
Izinto ezintsha zetekhnoloji zilulutho kuluntu lwethu kunye neenkalo ezininzi kunye nemizi-mveliso ngeendlela ezininzi. Enye ye-ecommerce entsha kukusetyenziswa kwetekhnoloji ye-3D. Umda wewebhu (okwangoku) sisakhono sokufumana amava apheleleyo kwimveliso njengathi ngaphakathi kwabantu kwindawo yokuthengisa.
Kude kube i-AR kunye ne-VR yamkelwe ngokubanzi, eyona nto inegalelo kunye nokuzibandakanya kukukwazi ukuyihlola ngokuchanekileyo imveliso ekwi-intanethi apho unokujikeleza khona uze usondeze imveliso ukuze ubone zonke iinkalo zayo. Xa bendisandula ukuthenga ibar yesandi yesitudiyo sethu, ndikwazile ukujikeleza ndisondeza amagalelo ukuqinisekisa ukuba iyahambelana nezinye izixhobo esinazo. Oko kwakulula kakhulu kunokususa ukhula kwimakhishithi yolwazi ngemveliso!
Yintoni i-3D Configurator?
Isicwangcisi se-3D sisicelo esivumela abathengi bakho ukuba babonise iimveliso zakho kuzo zonke i-engile. Iya kwenza ukuba abathengi bakho bakwazi ukwenza ngokwezifiso iimveliso zakho ngokukhawuleza nangokunxibelelana. Ixesha langempela le-3D Configurator sisixhobo esinokunyusa amaxabiso okuguqula kwiwebhusayithi yakho. Le ndlela yokuthengisa ye-3D ivumela abathengi ukuba bahlole kwaye benze ngokwezifiso iimveliso ngexesha langempela. Unxibelelwano lwe-3D lufunyenwe luphucula unxibelelwano lwabathengi kwaye -kwanelisekile. Ngokwandisa ukuvavanywa kokucokisekileyo, unokunciphisa ukubuyela kunye nokuxhamla kwabathengi.
I-VisCircle-Inkampani ye-3D Configurator
VisCircle ngumboneleli wexesha langempela le-3D. Nokuba uthengisa umsesane womtshato, isingqengqelo, imoto, izixhobo okanye usiba, banokwenza ukuba isebenzisane ngakumbi kwaye ibe nomtsalane. Iqonga labo lenza ukuba abathengisi bakwazi ukudibanisa izinto ezahlukeneyo, izixhobo kunye neempawu zeemveliso ukwandisa uguquko ngokubanzi.
The Umqwalaseli we3D enikezwe yiVisCircle isebenza kuzo zonke iinkqubo eziqhelekileyo kubandakanya iiWindows, iMac OS, i-Android, i-iOS kunye nakwizikhangeli ezinje ngeGoogle Chrome okanye Firefox. Nanku umzekelo omkhulu:
FindThatLead Prospector: Khangela kwaye ufumane iiDilesi ze-imeyile eziKhokelwayo